Tababare Tite oo walaac ka muujiyay Messi, inkastoo kulanka caawa dhex mari doono Brazil iyo Argantina uu yahay mid saaxiibtinimo – Gool FM
(Saudi Arabia) 15 Nof 2019. Inkastoo kulanka caawa dhex mari doono xulalka Brazil iyo Argantina uu yahay mid saaxiibtinimo ah, hadana taasi kama horjoogsanin tababare Tete inuu ka walwalo, isla markaana uu ka fikiro sidii uu ku heli lahaa qaab uu ku joojiyo halista gooldhalineed ee Lionel Messi.
Haddaba tababare Tete ayey arrintan ka dhigtay inuu awoodi kari waayey inuu seexdo ka hor kulanka qorsheysan in fiidnimada caawa oo Jimco ah ay ku baastaan labada xul ee Brazil iyo Argantina King Saud University Stadium, caasimada Riyadh ee dalka Saudi Arabia.
Tete yaa wareysi uu bixiyay kahor kulanka caawa wuxuu ku sheegay:
“Xaqiiqdii Messi waa ciyaaryahan gaar ah, wuxuu leeyahay awood farsamo ee aad u fiican, ma awoodi kartid marna inaad joojiso ciyaaryahan sidaas ah, balse waan isku dayi doonaa”.
“Waxaan ka hadleynaa Messi, ciyaaryahan weyn, markii aan joogay Corinthians waxaan awoodi waayay inaan seexdo muddo seddex maalmood ah, sababtoo ah waxaan ka fekerayay sida uusan goolal nooga dhalinin Neymar Jr, oo waqtigaas ku sugnaa Santos”.
Tababare Tete ayaa bixiyay isla wareysigan oo kale inta lagu gudi jiray tartankii Copa America ee lasoo dhaafay kaddib markii uu qirtay, kahor kulankii semi-finalka oo ay la ciyaarayeen Argentina, in Lionel Messi uu u diiday hurdada.
Kulanka caawa dhex mari doona Argentina iyo Brazil ayaa lagu dhex arki doonaa dib ugu soo laabashada Lionel Messi ee xulkiisa qaranka, kaddib markii uu dhameystay ganaaxii seddexda bilood ahaa, taasoo ciqaab looga dhigay sababa la xiriira inuu weerar dhanka afka ah uu ku qaaday xiriirka kubadda cagta ee koonfurta America.